၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအားလုံး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုလေးစားပြီးကာကွယ်ပေးသည်. သင့်အား ပို၍ တိကျမှန်ကန်ပြီးကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်, ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၏ပြthis္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆိုက်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်. မဟုတ်ရင်ဒီ privacy ကိုမူဝါဒ၌ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်မှလွဲ။, သင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဆိုက်သည်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဆိုက်သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာ update လုပ်လိမ့်မည်. သင်ဆိုက်၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်ကိုသဘောတူသောအခါ, ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသဘောတူသည်ဟုသင်မှတ်ယူသည်. ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်.
ဃ)ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူများအားသတင်းဆိုးများတင်ခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်, ထိုကဲ့သို့သောဗလာအဖြစ်, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ, နှင့်ညစ်ညူးခြင်း. ကျနော်တို့ထုတ်ဝေအကြောင်းအရာပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်. မကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်, အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်.
က)ဆိုက်ကိုမပေးပါ, ရောင်းသည်, ငှားရမ်း, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမသက်ဆိုင်သောတတိယပါတီသို့မျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းဝယ်ခြင်း, အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကြိုတင်ရယူခြင်းမရှိပါက, သို့မဟုတ်တတိယပါတီနှင့်ဆိုက် (ဆိုက်ရဲ့တွဲဖက်အပါအဝငျ) သီးခြားစီဖြစ်စေ၊, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်, ၎င်းတို့အားယခင်ကရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများအပါအဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုတားမြစ်လိမ့်မည်.
ခ) မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှစုဆောင်းခွင့်မပြုပါ, တည်းဖြတ်သည်, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအခမဲ့ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်း. ဆိုက်၏မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူသည်အထက်ပါလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပါက, ဆိုက်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်အသုံးပြုသူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်အားရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
ဂ)အသုံးပြုသူများကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဆိုက်သည်သင့်အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်, အပါအ ၀ င်သင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်အတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်, သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသင့်ကိုသတင်းပို့နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း (အဆုံးစွန်သောသင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်).
ဂ) ဥပဒေ၏သက်ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များအရ, သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကို, တတိယပါတီများသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည် ;
ဃ) သင်သည်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်ဆိုက်၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ပါက, တတိယပါတီထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်;
f)ဆိုက်၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖန်တီးထားသောငွေပေးငွေယူတွင်, အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်း၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖွင့်ဟရန်တောင်းဆိုမှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆည်းပါက, ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူအားငွေပေးငွေယူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဆက်အသွယ်များ၏သတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့သောလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အရောင်းအ ၀ ယ်ပြီးစီးရန်သို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူစေရန်.
ဆ) ဥပဒေနှင့်အညီသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောအခြားထုတ်ဖော်မှုများ, စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မူဝါဒများ.
ဆိုက်မှသင်စုဆောင်းထားသောသင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုဆိုက်၏ဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည် / သို့မဟုတ်ယင်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ, နှင့်ဤသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာကိုသင့်နိုင်ငံသို့ပေးပို့နိုင်သည်, ဆိုက်မှကောက်ယူသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုတည်ရှိရာနှင့်ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့်နေရာဒေသသို့မဟုတ်နိုင်ငံရပ်ခြား, သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရေခြားမြေခြားပြသ.
က) သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ပါက, ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုထူထောင်မည်သို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည်သင်၏ cookie ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်နိုင်မည်. cookies များကိုသုံးခြင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပိုပြီးစဉ်းစားဟန်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ပါသည်, မြှင့်တင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအပါအဝင်.
က)သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သင်၏ browser setting ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်. သို့သော်, သငျသညျ cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ဖို့ရွေးချယ်လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကွတ်ကီးများပေါ်တွင်မူတည်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုသင် ဝင်ရောက်၍ မရနိုင်ပါ.
က) ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်တွင်လုံခြုံရေးကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်. ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်အချက်အလက်များကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းပါ. သင်၏သတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဆိုက်ကအာမခံပေးပါလိမ့်မည်, အသုံးပြုသူစကားဝှက်နှင့်အခြားလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုစာဝှက်ခြင်းဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း. အထက်ဖော်ပြပါလုံခြုံရေးအစီအမံများကြားမှ, မရှိကြောင်းသတိပြုပါ "ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေးအစီအမံ" သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်ပေါ်မှာ.
ခ) အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်ဆိုက်၏ကွန်ရက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမလွှဲမရှောင်ထုတ်ဖေါ်ရန်လိုအပ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအဆက်အသွယ်အချက်အလက်သို့မဟုတ်စာတိုက်လိပ်စာအဖြစ်, အဆိုပါ counterparties သို့မဟုတ်အလားအလာရှိသော counterparties ရန်. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပြီးလိုအပ်လျှင်သာအခြားသူများအားဖြည့်ပါ. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါက်ကြားကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါက, အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သည်သက်ဆိုင်ရာအစီအမံများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ.